Thu, May 26, 2022 | 13:18:10 NST
Posted: Saturday, May 05, 2018 08:06 AM (4years ago )
तर चीनले दिएको मार्क्सको प्रतिमाले भने जमर्न नागरिकहरुलाई विभाजन गरिदिएको छ । मार्क्सको २ सयौँ जन्मजयन्तीको अवसरमा चीनले दिएको प्रतिमा मार्क्स जन्मेको ट्रियर सहरमा अनावरण गरिँदैछ ।
मार्क्सले फ्रेडरिक एंगेल्ससँग मिलेर सन् १८४८ मा ‘कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो’ लेखे । जसलाई साम्यवादी सिद्धान्त अँगाल्नेहरुले एउटा आधारपुस्तिकाका रुपमा लिन थाले । मार्क्सले सबै मानव इतिहास वर्गसंघर्षमा आधारित छ भने । माक्र्सको तर्क यस्तो छ, ‘पुरानो सामाजिक आर्थिक प्रणाली सरह पूँजीवाद पनि आन्तरिक तनावको कारण विनाश भएर जानेछ, जसरी सामन्तवादको स्थान पूँजीवादले लिन्छ त्यसरी नै समाजवादले पनि पूँजीवादको स्थान ओगट्ने पालो निश्चय आउनेछ अनि राज्यविहीन, वर्गहीन शुद्ध साम्यवादी समाजको निर्माण हुनेछ ।’
मार्क्सका कृतिहरु युरोपमा विवादित भएका छन् तर चीनले भने मार्क्सको सिद्धान्तका अहिलेसम्म आधारमा नै शासन प्रणाली अगाडि बढाएको छ ।
शनिबार ट्रियरमा साम्यवादी विरोधी तथा पूँजीवादी विरोधी दुवै समूहले र्‍याली निकाल्दैछन् । अधिकारीहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न रोक नलगाइएको तर प्रदर्शनलाई हिंसात्मक नबनाउन अपील गरेको छ । ‘यदि तपाईँ मार्क्सको विरोध गर्नुहुन्छ, गर्नुस् तर हिंसात्मक तरिकाले होइन’, ट्रियरका प्रवक्ता माइकल सिमिजले भनेका छन् ।
मार्क्सको विरोध किन ?
मार्क्सको सिद्धान्त साम्यवादी व्यवस्थाको आधार नै हो । साम्यवादी शासनप्रणाली अन्तरगत सबै चिज समुदायले अपनत्व लिएको हुन्छ भने समाजमा वर्ग विभेद रहँदैन । भन्नलाई यसो भनिए पनि साम्यवादी व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा पनि वर्गविभेद रहँदै आएको छ ।
साम्यवादी मुलुकहरुमा मानव अधिकारको कदर नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन सोभियत संघ र चीनले नागरिकको शोषण गरेको मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । जर्मनीको पूर्वी भागमा सोभियत संघले सन् १९४९ देखि १९९० सम्म शासन गर्दै आएको थियो ।
सन् १९८९ को नोभेम्बरमा बर्लिन पर्खाल भत्काइएपछि दुई जर्मनीको एकीकरण भएको थियो । साम्यवादी व्यवस्था अँगालेको पूर्र्व जर्मनी पश्चिम जर्मनीभन्दा निकै कमजोर आर्थिक अवस्था भएको थियो । जर्मनीको राइनल्याण्ड–प्यालाटिनेट राज्यका नेता मलु ड्रेयरले मार्क्सको सम्झनामा उनलाई र उनको कार्यका बारेमा छलफल गर्न भएको बताउँदै उत्सव मनाउनका लागि नभएको बताएका छन् ।
सन् २००८ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि मार्क्सका सिद्धान्तमाथि फेरि एक पटक रुची देखाइएको छ ।
प्रतिमाको विरोध किन ?
चीनले उपहार दिएको साढे चार मिटर अग्लो मार्क्सको प्रतिमालाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नै जर्मनीमा मत विभाजन भएको थियो । कतिपयले चीनले मानव अधिकारको रक्षा नगरेको भन्दै उसले दिएको उपहार स्वीकार्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
शुक्रबार मात्रै लेखकहरुको संगठन पेन जर्मनीले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता लिउ जियाओबोकी श्रीमती लिउ जियालाई नजरबन्दबाट मुक्त नगरेसम्म चीनले दिउको प्रतिमा अनावरण गर्न नहुने बताएको थियो । सन् २०१० देखि कुनै अपराध नगरेकी लिउलाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।
‘हामीले यसलाई मित्रताका प्रतिकका रुपमा स्वीकार गरेका हौँ । यो प्रतिमाले मार्क्सका बारेमा अझ धेरै बुझ्न मानिसहरुलाई प्रेरित गर्नेछ’, ट्रियरका नगरप्रमुख वोल्फ्रम लिबेले भने, ‘केही निर्णय पूर्वाग्रहहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ ।’
जर्मनीमा मार्क्सका थुप्रै ठाउँमा प्रतिमाहरु छन् । उनी जन्मेको घरमा तथा राजधनी बर्लिनमा मार्क्सका प्रतिमा रहेका छन् । चीनबाट ५० हजारसहित झण्डै ४५ लाखले मार्क्स जन्मेको ट्रियर सहर भ्रमण गर्ने नगरप्रमुख वोल्फ्रमले बताए ।
सन् १८१८ मा जर्मनीको ट्रियरमा जन्मिएका मार्क्सको निधन सन् १८८३ मा लण्डनमा भएको थियो ।